Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu la yimid cabbir ka ballaaran: 40 iyo 44 mm | Wararka IPhone
Daqiiqad cusub oo daatay ayaa daaha ka qaadi doonta cabirka Apple Watch Series 4 cusubXaaladdan oo kale waxay u muuqataa in cabirrada cusub ee saacadaha casriga ah ee Apple ay xoogaa ka weynaan doonaan kuwa hadda jira, gaar ahaan iyo sida lagu arki karo cinwaanka warkan: 40 iyo 44 mm siday u kala horreeyaan.
Waxay umuuqataa inay cadahay in kuwani ay yihiin cabirro cusub oo loogu talagalay dhammaan moodooyinka cusub ee soo bandhigaya, ha ahaadaan ama ha lagu heli karo dhoobada dhoobada, aluminium ama bir dhammeystiran. Waxay umuuqataa in ugu dambayntii cabirka setku waxyar usii kordhayo, in kasta oo aan loo baahnayn in tan lagu murmo tan iyo tan waxaan ka hadlaynaa 2mm mid kasta oo saacadaha ka mid ah.
Xargaha iyo qalabka ku habboon moodooyinka hadda jira ma shaqeyn doonaan?
Hagaag, wax walba waxay muujinayaan in kala duwanaanshaha cabirkani uusan saameyn ku yeelan doonin qalabka iyo xargaha aan maanta ka heleyno moodooyinka 38 iyo 42mm, laakiin tani waxay noqon doontaa wax aan ku xaqiijin doono saacado yar gudahood markii Apple ay si rasmi ah u soo bandhigeyso saacadaha. Shaandhaynta cabbirka cusubi wuxuu ka yimid AllThingsHow waana in cinwaanada URL qaarkood ay shaaca ka qaadeen mid ka mid ah sheeko cusub ayaa laga filayaa taxanahan cusub ee 4.
Haatan waxaan shaki weyn ka qabnaa moodooyinka la bilaabi doono waana taas khadadkaas ma aragno nooc 38mm ah sidaa darteedna Waxay noqon kartaa inay iib tahay ama si fudud in qabashada aysan tusin dhammaan URL-yada la sifeeyey maadaama aysan haysan meel ku filan ama wax la mid ah. Qodob kale oo u muuqda mid cad in qabashada ayaa ah in moodooyinka dhoobada laga tagi doono iibka waana arki karnaa inaan iyagana la muujin.
Hadda Waa la arki doonaa waxa ay ku sameyn doonaan moodooyinka hadda jira 38 iyo 42 mm maadaama ay noqon karto inay iyagu si toos ah ugala baxaan dukaanka ama ay ugu dambayntii uga tagaan moodel qiimo ka jaban kan Taxanahan cusub ee 4. Waxan oo dhan ayaan ku ogaan doonnaa saacado yar gudahood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu yeelan doonaa cabbir ka ballaaran: 40 iyo 44 mm
Xarkaha hadda jira si ay ula qabsadaan, waxaa laga yaabaa in cabbirka uu saameyn ku yeesho dhererka laakiin uusan saameyn ku lahayn ballaca, galabtaan waan arki doonnaa
Sax Ricky, wax walbaa waxay soo jeedinayaan in xargaha hadda jira iyo qalabyada kale ay ansax u noqon doonaan moodooyinka saacadaha cusub. Waxaan mar horeba rabay inaan arko iyaga iyo gaar ahaan in lagu bilaabay halkan LTE!
Subax wanaagsan: Aluminium ama bir bir ah? By habka, waxay sidoo kale bilaabayaan inay ku iibiyaan Taxanaha 3 LTE.